Ejipta: Fanentanana hanohitra ny famoràna zazalahy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Jona 2009 13:12 GMT
Tamin'ny2008 i Ejypta no namoaka lalàna iray mandràra ny fanapàhana atao amin'ny vehivavy (FGM) [toy ny famoràna amin'ny lehilahy izy io] . Nisy vondrona mpitoraka blaogy iray androany nanomboka fanentanana hanoherana ny famoràna ny lehilahy .
Zobaida tompon'ny Al Haramlek Blog dia niteraka zazalahikely iray ary tsy mamèla ny hamoràna azy any amin'ny tobim-pahasalamana; Nanoratra momba ny fihaonany tamin'ny mpitsabo tao amin'ny toeram-pitsaboana izy:
Hoy ny mpitsabo: “Fepetra ho an'ny fahadiovana ara-pahasalamana ho azy izy io”
Hoy ny navaliny: “Eny e! .. satria ao anatin'ny taona faha 4-n'ny Hijri [fanisàn'andro Arabo] isika ary tsy mbola naheno mihitsy izany atao hoe savony, shampoing, ary ny lafika Johnson & Johnson natao ho an'ny zazakely?”
Nihevitra aho ny hanazava tamin'ilay mpitsabo, izay angamba tsy mahafantatra firy ny momba ny tenan'olombelona ankoatr'izay nampianarina azy toy ireny anaty boky “Ho an'ny mpampiasa [user manual]” ireny . Tao an-tsaiko ihany koa ny hiteny taminy fa tsy hamèla Jiosy mihitsy hanery ahy hanapaka na dia singam-bolo iray amin'ny tenan-janako aho saingy niniako nohidiana ny molotro – noho izy mety tsy mahafantatra zavatra firy momba ny Jiosy ankoatra izay rèny momba an-dry zareo hoe taranaka rajako sy kisoa… inona no mba vintana anànany hanakatra ny amin'izay tiako hambàra azy?
Avy eo nanopy maso an-janany izy no sady niteny hoe:
Tsy haiko hoe rahoviana ny mpitsabo no tena hamèla anay saingy inona no tena mba ao an'eritreritr'izy ireo rehefa te-haka ny zanakolahy izay vao iray andro monja ka hanindrona fanjaitra ity vatana keliny mbola marefo sy hanàpaka ampahany aminy aminà hety mamanàla iray? Ireo mpanimbin-kena ireo dia te-hampangirifiry anao dieny aty amin'ny andro voalohany iainanao eto amin'ity tany ity ary hampangirifiry mafy anao rehefa injay mahakitika io fery misokatra io ny pipy [amany] .. Ireo mpanimbin-kena vendrana ireo! Aza matahotra azy ireo izany zanako lahy malalako izany, tsy misy olona afaka hanainga ny tanany aminao raha mbola velona koa aho. Rehefa lehibe ianao dia azonao atao ny manapaka izay tianao tapàhana amin'ny tenanao … mandrapahatongan'izany tsy misy olona afaka hikitika anao.
Eo ampisainana ny zanany vao teraka, dia naniry izy hoe:
Tiako tokoa ny hampanantena anao hoe ity no farany hikirakirana anao ao anaty tsy firaharahiana sy halozàna saingy, indrisy, fantatro loatra fa tsy izany no fizotry ny tantara …Vao ny dingana voalohany ity!
Emad ao amin'ny Something for the Soul nanoratra hoe:
Misaotra ny Tompo, ny Fanentanana nataontsika tao amin'ny Facebook ho fanoherana ny famoràna ny zazalahy dia nahasarika ny sain'ny mpikambana marobe tokoa. Dr. Seham Abdel Salam - mpikaroka iray sady mpanoratra – dia nanohana ny fitakiantsika tamin'ny filazàna fa ny famoràna zazalahy dia asan'ny mpanimbin-kena tsotra izao ary ny fototra nipoirany mivantana dia avy amin'ny fiaraha-monina anjakan'ny lehilahy; tsy misy idiran'ny Silamo mihitsy ao anatin'izany fomba izany. Ny NOCIRC ihany koa – fikambanana Amerikana iray miady amin'ny famoràna ny zazalahy – dia nila resaka tamintsika.
Ao amin'ny Facebook-ndry zareo, tonga dia nokianin-dry zareo ka nanaovany hitsin-dàlana ny resaka maro mifandray amin'ny fanoherana izay anaovan'izy ireo fanentanana; fivavahana, Siansa, SIDA, ary ny fahadiovana.
Ny mpitoraka blaogy Ahmad Al Sabbagh indray dia leo amin'ny karazana fanentanana toy itony ka nilaza fa:
Tampotampoka eo ary amin'ny fotoana toa mampilamina ny zavatra rehetra, tafajabaka taminà vondrona Facebook iray tsy mankasitraka ny famoràna zazalahy aho! Nandefa sary vitsivitsy momba ny fizotry ny famoràna mihitsy ilay vondrona mba hanehoany ny endrika habibiana ananan'ity fomba ity. Mazava loatra fa tsy hiditra amin'ny antsipirihany aho satria izaho tsy olona mpivavaka saingy heveriko fa raha mihazakazaka manàkana olona mpivavaka eny an-dàlana eny ianao mba mangataka azy hizara ny fomba fijeriny ny amin'ny fandraràna ny famoràna zazalahy, azoko antoka fa tsy hahafaly azy velively ianao ary tsy ho tompon'ny tenany izy hiteny aminao ny mba hampiasanao saina tsara!
Mamindra fo aminay! Avelao izahay hilamina.. feno ny kapoakanay!
Fototra toy inona no anorenanareo ny fitakianareo? Ara-pivavahana sy ara-tsiantifika? Sa fialonana ny vehivavy dia nanapa-kevitra ianareo hitaky fitovian-jo eo amin'ny lahy sy ny vavy nony injay hoe famoràna no resahana? Efa lany balan'ny fiarovana ny zon'olombelona ve isika eto Ejipta ka tsy hiresaka intsony afa-tsy iny lohan-javatra kely iny?
Mamindra fo aminay ..Mitalaho aminao aho!